Nhau - Kukwira kwemarara kunotsigira mitengo yeEuropean rebar
Wakadzikama, mutengo-wakadzika-mutengo wakakwira wakaitwa nevagadziri vezve rebar muWestern Europe nyika, mwedzi uno. Kushandiswa neindasitiri yekuvaka inoramba iine hutano. Zvakangodaro, kushomeka kwemahombe-mavhoriyamu mashandisirwo anoonekwa uye kunetsekana pamusoro peCovid-19 inoramba iripo.
Zvigayo zveGerman zvinogadzika pasi yemutengo
Vagadziri veGerman rebar varikugadzira hwaro hwepasi pasi hwe € 200 patani. Mills anoshuma akanaka odha mabhuku, uye kuendesa nguva yekutungamira iri pakati pevhiki ina nematanhatu. Kutenga kwakadzikira zvishoma, asi chiitiko chinofanira kutora mumwedzi inotevera. Vagadziri vemumba vari kusangana neakasvinwa mibairo yemubhadharo sezvo vachiri kusimudza kukosha kwavo kwekutengesa.
Simba rekuvaka kweBelgian rakabvunzwa
MuBelgium, hwaro hwehunhu huri kuwedzera nekuda kwekukwira kwemarara. Vatengi vanogona kubvuma kumwe kufambira mberi, kuti vawane zvinhu. Nekudaro, akati wandei mapurosesa ari kutadza kuratidza ekutsiva emutengo mumutengo wekutengesa wezvavanopedza zvigadzirwa.
Vatori vechikamu chevashambadziri vane maonero akasiyana siyana nezve simba rezvekuvaka. Mamaneja ekutenga ane hanya kuti kudiwa kunogona kudonha gare gare mugore kana mapurojekiti matsva akasaburitswa.
Tariro dzekudyara kwehurumende muItari
Vagadziri vemuItaly vakagadzira mutengo wakaderera munaGunyana. Kudzoreredza kushoma munharaunda yekuvaka epamba kunoonekwa. Tariro dziripo kuti kudyara kwehurumende kunosimudzira chikamu ichocho, munguva pfupi. Vatengi, zvisinei, vanoramba vachitenga vakangwarira. Kunetsekana kwehupfumi kunopfuurira mukati meCovid-19 kuputika.
Vatengesi vezvimedu veItaly vakakwanisa kukwidza yavo yekutengesa tsika, mwedzi uno, vakasimbiswa nekukwira kwenzira yepasi rose. Kunyange zvakadaro, mapurani emuno 'zvigadzirwa zvekutenga zvigadzirwa zvakaganhurirwa.
Kuchengetedza kwemamiriyoni kunocheka kuburitsa kweSpanish
Spanish rebar hwaro hwetsika hwakadzikiswa mwedzi uno. Kuburitsa kwakaderedzwa nekuda kwezvirongwa zvekuchengetedza mill, asi kushomeka kwebhizimusi rakakura rehoriyamu kunoonekwa. Vatengi vakamirira kugamuchira makotesheni kubva kune yaimbova Gallardo Balboa rebar mill, iri kuGetafe, iyo ichangobva kuwanikwa neboka reCristian Lay.
Chiitiko muchikamu chekuvaka chiri kufamba mushe. Mamiriro ezvinhu mune mamwe maindasitiri akamira, semhedzisiro yemabasa anononoka uye kushomeka kwesarudzo pakati pechirwere checoronavirus.
Tct Denderedzwa Yakaona Nereza Yesimbi, Tct Denderedzwa Yakaona Nereza, Hss M35 Denderedzwa Yakaona Makasi, Hss M2 Denderedzwa Yakaona Makasi, Kupisa Kwekushandisa Chishandiso Simbi Yakakungurudzwa Flat Bar, Tct Denderedzwa Yakaona Makasi,